ညုခရီးသွားအပေါ် Flatboat goby – နောက်ထပ် Tocan ကွန်ယက်က်ဘ်ဆိုက်
မှန်ကန်သောဘာသာပြန်ချက်ယခု. ကျေးဇူးတင်ပါသည်! Klicken Sie auf Ihre Sprache und danach auf die Edit Box. Klicken Sie auf die gelben Felder.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ရဲလှေသို့မဟုတ်ဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်?, ခရီးသွား
လှေများအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်လောကလုံးနေရောင်ခြည်နှင့်ဘက်ထရီမော်နီတာမသာ (ဗီဒီယို & တိုက်ရိုက် Demo)
12 Volt DC က Bordelektrik, လှေပေါ်လျှပ်စစ်, Openplotter
ဘုတ်အဖွဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Rasperey Pi, Openplotter
သင်္ဘောတံဆိပ်ခေါင်းမော်တာရွက်လှေ Daniela Tocan
တပတ်ရစ်သင်္ဘောကြီး? စောင့်ရှောက်မှု, သန့်ရှင်းသော, တိုက်ရိုက်ဆုံး
Manche behaupten ja Ihre Festmacher halten 30 နှစ်နှင့်နေဆဲထိပ်တန်းရှိပါတယ်. သို့သော်တဦးတည်းကထိုကဲ့သို့သောဟောင်းပိတ်ချောယုံကြည်စိတ်ချအားဆက်လက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်. Alte Leinen werden durch… ဆက်ဖတ်ရန်
12 Volt DC က Bordelektrik, ပစ္စည်းကရိယာ, ဗီဒီယိုကို
Eine Solaranlage besteht aus vielen Komponenten. Bei der Entscheidung habe ich es mir nicht leicht gemacht. Zuerst wurden die Solarmodule angeschafft. Hochleistungsmodule, die ansonsten für den Industriellen Einsatz konzipiert wurden.… ဆက်ဖတ်ရန်
ဘုတ်အဖွဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Rasperey Pi, Schiff, ဗီဒီယိုကို
ပင်လယ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံရေး (သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကတ်များယုံကြည်စိတ်ချနိုင် OpenSeaMap)
ကျနော်တို့ကစားရန်တစ်ခုခုရရှိပါသည်. ရောက်လာဒေတာဘေ့စနှင့် Grafana နှင့်အတူ Raspberry Pi Dasboard
ယေဘုယျအားဖြင့်, နိုင်ငံပေါင်း, နယ်သာလန်, မြို့ရွာ, ခရီးသွား, Wessem
Wessem Aus Wikipedia, die freie Enzyklopädie Wessem Land Niederlande Provinz Limburg Gemeinde Maasgouw Bevölkerung (1 ဇန္နဝါရီလ 2006) 2,210 Hauptverkehrsstraßen Maas, A2 Wessem ist ein kleines Dorf in den Niederlanden, in der Provinz… ဆက်ဖတ်ရန်
samp: ukrain. hominy, auch Кулеша; Russ. mamaliga (ရာဇမတ်ကွက် "Maisbrei" header); poln. hominy; ungar. Puliszka, "Maisbrei") ist ein aus Maisgrieß hergestellter fester Brei, ähnlich der italienischen Polenta, der in Rumänien, Moldawien und anderen Teilen des Balkans sowie in der Kaukasusregion zur regionalen Kochtradition gehört. Besonders in Rumänien ist… ဆက်ဖတ်ရန်
Zwolle, Turm, Stadtgraben und Brücke Das in der Nähe des IJsselmeeres gelegene Zwolle ist die Hauptstadt der niederländischen Provinz Overijssel. Im Gebiet von Zwolle entsteht das nur 19 km lange… ဆက်ဖတ်ရန်
ကေဘယ်လ်ကြိုးအတှကျတိုကျပှဲ. IOT (အရာများ၏အင်တာနက်ကို) Openplotter နှင့် ESP8266 နဲ့ငါ့လှေပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်.
Kreuzpinzette Lötpinzette gerade 16 စင်တီမီတာ "Dritte Hand" Pinzette Industriequalität €5,90 €5,30
USB က SDR AIS လက်ခံဘန်ဝစ်- SDR V3 €40,00
Augenbrauen-Pinzette Tweezer V1 by Tocan, TC, Hartmetall, Slant , 12,5 စင်တီမီတာ, Tuxette Pinguin €20,17 €20,17